Kulan aad u balaaran oo ka dhacay Tuulada “ Buulalloow” oo ka tirsan Wilaayada Islaamiga ah ee Shabellaha Hoose. | Halganka Online
War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Nala Xiriir	Walaalkeen Sheikh Mohamed Umal weydiiya wadaad diintii laga bililiqaystay ?? Sh C/Qaadir Mu’min oo xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu ahaa (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK. Beesha deegaanka Iidaale Gobalka Bay oo Hubkii ugu tirada badnaa ku wareejisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Xoogaga deegaanka Galgalo oo gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkii maanta iyo Laag iyo Karin oo lala wareegay. Calamada Ilmoland – England, Scotland, Finland, Iceland,Switzerland, Somaliland, & Puntland – oo kan Puntland ugu Foolxun Yahay!. Sarkaal katirsan Xisbul Islaam oo Cod qarsoodi ah laga qabtay isagoo ku faraxsan qabsashadaii Dhoobleey dhiiri gelina u samaynaya Maleeshiyada Axmed Madoobe iyo ONLF.(dhagayso) Kulan aad u balaaran oo ka dhacay Tuulada “ Buulalloow” oo ka tirsan Wilaayada Islaamiga ah ee Shabellaha Hoose.
Posted on July 15, 2010 by halganka	Kulan aad u weyn isla markaana ay kasoo qayb galeen in ka badan 1,000 qofood oo isugu jira Culimaa’udiin ,Nabadoono, Salaadiin, Ugaasyo iyo wax-garad fara badan ayna goob jog ka ahaayeen Masuuliyiinta ugu sareysa Wilaayada Islaamiga ah ee Shabellaha Hoose ayaa maanta wuxuu ka dhacay Tuulada “Buulallooow” ee hoos tagta Degmada Afgooye.
Munaasabada ayaa waxaa soo agaasimay wax-garadka qaar ka mid ah beelaha ku dhaqan deegaanada kala ah “ Sabiid, Jambaluul, Baqdaad, Mukayga, Doonka, Deefoow, Baladul Amiin, Cadoow Dibile iyo Basra” kuwaas oo marti qaad weyn u fidiyay Masuuliyiinta Wilaayada Islaamiga ah ee Shabellaha Hoose Masuuliyiintuna ay soo ajiibeen.
Kulanka ayaa si rasmi ah u bilowday Salaadii Duhur kadib, waxaana goobta si gooni gooni ah hadallo kaga jeediyay Nabadoonada, Salaadiinta, Ugaasyada beelaha kala ah “Galladi, Wacdaan Cismaan, Murusade, Gorgaarte, Hintire, Garre, iyo Gibil-Cad” kuwaas oo dhamaantood muujiyay sida ay Taageero dhan walba ugu hayaan Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose iyo Guud ahaan Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Beelaha halkaas ku dhaqan ayaa dib u jaleecay dhibaatooyinkii soo maray xilliyadii ay Sh/Hoose ku amar-taaglayn jireen Maleeshiyaadkii qaab-beeleedka ku dhisnaa, iyadoo qabiil walba uu midka ka awood yar kula kici jiray falal wuxuushnimo ah, ilaa ay arintu gaartay in dadka taagta daran laga mamnuuco isticmaalka biyaha wabiga Shabeelle inay lacago bixiyaan maahane.
Beelihii Madasha ka hadlay ayaa si wada jir ah waxay ugu horeyn Allaah uga mahad celiyeen Nabad gelyada buuxda iyo Barwaaqada ay hada ku haystaan Wilaayada Shabellaha Hoose, Taas oo Allaah Fadiligiis ku timid kadibna Dadaalka ay bixisay Wilaayada Shabellaha Hoose kaas oo meesha looga saaray wax walba oo carqalad ku ah habsami u socodka nolosha dadka Muslimiinta ah ee Wilaayada ku dhaqan.
Akhiyaartii kulanka kasoo qayb gashay ayaa waxay si isku mid ah u bogaadiyeen weeraradii maalinkii Axada ahayd ee lasoo dhaafay ay Mujaahidiintu la beegsadeen goobo ku yaalla Caasimada wadanka Yugaandha ee Kampala, waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsanyihiin inay arkaan Kirishtaanka Xasuuqa ka wada Muqdisho oo markiisa lagu xasuuqayo Caasimadiisa.
Dhanka kale Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Shabellaha Hoose “Sheekh Maxammed Abu Cabdalla” oo kulanka ka halday ayaa uga mahad celiyay beelihii marti qaadka u fidiyay Masuuliyiinta Wilaayada, wuxuu kaloo uga mahad celiyay sida ay u garab taaganyihiin Wilaayada Islaamiga ah iyo wada shaqaynta wanaaga badan ee kala dhaxaysa Mujaahidiinta.
Waaliga ayaa sheegay inay meesha ka baxday kala sareyntii ka jiri jirtay Sh/Hoose oo maanta aysan jirin kanaa laandhere ah iyo kanaa laan-gaab ah, dadka Muslimiinta ahna ay siman yihiin, Nabada iyo Barwaaqada ka jirta Wilaayaduna ay ku timid Fadliga Jihaadka, Sidaas daraadeed inay waajib tahay in lasii xoojiyo wadadaas si wanaagu usii jiro.
Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose ayaa aqbalay codsi ay usoo jeediyeen wax-garadkii maanta uu kulanka la qaatay, taas oo ahayd in Wilaayadu ay soo kordhiso tirade Ducaada “Culimada Diinta dadka barta” ee ay usoo direyso dadka deegaanadaas ku dhaqan, maadaama dhulku uu yahay mid aad u baaxad weyn dadkuna aad ugu baahi qabo in si weyn looga gacan siiyo barashada iyo hirgelinta shareecada Islaamka.
Ugu dambeyntii kulanka ayaa sidii loogu tala galay kusoo gabagabooyay saacadu markii ay ahayd“ 5:00pm” Galabnimo, wuxuuna kulankaasi qayb ka yahay kulamo wada tashi joogto ah oo ay yeeshaan Masuuliyiinta Wilaayaat-ka Islaamiga ah ee ka jira Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya iyo bulshada dhulkaas baaxada leh ku dhaqan.
Filed under: Uncategorized « Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa fariin soo diray oo kaga hadlaayo qaraxyadii barakaysnaa ee ka dhacay magaalada kampala ee dalka uganda.(DHAGAYSO) Maamulka islaamiga ah ee degmada balacad oo maanta xukun xad ah ku fuliyay labo ruux oo lagu soo qabtay falal xatooyo ah. »
maxamd, on July 16, 2010 at 3:33 pm said:	walaal waxaan inii sheega inaa muslimiinta beenta lagadhaayo waayo hadaad wax iskuheeydaan dadka haka burina wabka waayo waxeey kadhiibanaayan ra yigooda oodhiin kusaleeysan